गलत बाटोतर्फ एसईई परिक्षार्थी - समायोजन खबर
गलत बाटोतर्फ एसईई परिक्षार्थी
यतिबेला देशभर एसईई ग्रेड सुधारको परिक्षा चलिरहेको छ । विभिन्न विषयमा ग्रेड सुधारका लागि खोटाङको दिक्तेलबजारमा पनि विधार्थीहरुको चाप बढेको छ । एसईई परिक्षा दिन आएका विधार्थीहरुले होटलहरु भरिभराउ छन् । बजारमा पहिलेको तुलनामा राम्रै चाप देखिन्छ । हाई काढेर वस्नुपर्ने होटल व्यवसायीलाई केही रुपमा यसले राहत पुगेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
१ भदौबाट एसईई ग्रेड सुधार परिक्षा भईरहंदा परिक्षामा विधार्थीले कस्तो लेख्यो त्यो विधार्थीमा निहित रह्यो । तर ! तीन परिक्षा केन्द्रबाट बाहिरिएपछि दिक्तेलबजारमा विधार्थीको थरिथरीका चर्तिकला राम्रै देख्न पाईन्छ । यसले भविष्यका कर्णाधार विधार्थीहरुको ध्यान कतातिर जादैछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । विधार्थीहरुको चर्तिकला देख्दा एसईई ग्रेड सुधारका लागि भन्दा मनोरञ्जन र विलासिताका निम्ति सदरमुकाम आएको भान हुन्छ । परिक्षा दिन आएका कतिपय किशोर किशोरीहरु थाहै नपाई आपत्तीजनक अवस्थामा समेत भेटिन्छन् ।
किशोर किशोरीहरु बजारमा फेसन देखाउन र सान देखाउनमा लालयित देखिन्छन् । यतिसम्म कि साँझ परेपछि हाँटडाँडादेखी रत्नपार्कसम्मका प्रायः होटलहरुमा एसईई दिन बसेका विधार्थीहरु मध्यपान र धुम्रपानमा लठ्ठ भएका भेटिन्छ । परिक्षा राम्रो भएको निहुंमा त, बिग्रिएको निहुंमा । त्यहाँ किशोर किशोरीहरु नै सामेल हुन्छन् । यसले हाम्रा छोराछोरी कतातिर जादैछ । यसको परिणाम कस्तो आउछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । छोराछोरी परिक्षा दिन गएको छ राम्रो अंक ल्याउछन् भन्ने अभिभावकहरुको साझा सोेचाई हो । तर, नतिजा त्यो आउने खास छाटकाट देखिन्न । विधार्थीहरुको क्रियाकलाप देख्दा ।
अधिकांश विधार्थीहरु विहानदेखी वेलुकासम्म दिक्तेलबजारमा फरक फरक पोशाक तर, त्यही मान्छे चक्कर लगाइरहेको दृश्यहरु भेटिन्छ । किशोर किशोरीहरु हेलिप्याड, अल्छेढुंगा, जैपुरीडाँडा, मझुवागढी, थामखोरेडाँडामा दिउँसो तथा साँझमा जोडीजोडी भेटिन्छन् । कतिपय अवस्था त आपत्तीजनक अवस्थामा पनि विधार्थीहरु भेटिएको पाइएको छ । माथि उल्लेखित स्थानमा साँझको समयमा त्यस्ता जोडीहरु बढि भेटिने गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् । यस्तै, साँझ परेपछि होटलमा मध्यपान र धुम्रपानमा लठ्ठीएर सामूहिक सेल्फी, नृत्यदेखी लिएर डेटिङसम्म किशोर किशोरी भेटिदा त्यसले के प्रश्न उब्जाउछ भने, कतै नकारात्मक काम त हुने हैन । यसले मन झसङ्ग बनाउछ ।
एसईई दिन आएका विधार्थीहरुले गरेका गलत कार्यहरुको जानकारी परिवारसम्म पनि पुगेका छन् । हतारमा परिवारले छोराछोरीलाई फोनबाटै सम्झाउने गरेका छन् । एसईई ग्रेड सुधार परिक्षाका लागि आएका अधिकांश विधार्थीहरु कुलतमा फस्ने वातावरण सिर्जना गरिरहेको आभास हुन्छ । किशोर किशोरीहरु साँझमा नै होटलमा जम्मा भएर धुम्रपान/मध्यापनमा रम्नु, साँझको समयमा एकान्त स्थानमा आपत्तीजनक अवस्थामा पाउनु, सार्वजनिक स्थलमा सामूहिक धुम्रापन गर्नुले किशोर किशोरीहरु कुन दिशातर्फ जादैछ भन्ने राम्रै ठम्याउन सकिन्छ । अवश्य पनि यसले राम्रो नतिजा दिदैन । शिक्षा दिएर मात्रै हैन छोराछोरी कुन बाटोतर्फ लाग्दैछ भन्ने विषयमा पनि अभिभावक गम्भीर भए सोच्ने कि ? नत्र, हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता घट्ना नघट्लान भन्न सकिन्न । यसतर्फ सबैको वेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ ।
एसईई परिक्षार्थीजस्तै सामुदायिक तथा नीजि विधालयहरुमा अध्ययनरत किशोर किशोरीहरु पनि गलत बाटोतर्फ लागेको धेरै भेटिन्छ । सामुदायिक तथा नीजि विधालयले कक्षाकोठाभित्र मात्रै हैन विधार्थीको बाहिरी क्रियाकलाप पनि कस्तो छ भनेर सोच्ने कि ? अहिलेका विधार्थीहरुको क्रियाकलाप देख्दा खासगरी परिवारले छोराछोरीको निगरानी गर्नै छोडेका हुन ? कि किशोर किशोरीहरुले विलासी जीवन खोजेका हुन् ? यो गम्भीर विषय बन्दै गएको छ ।
पिकनिकको बहानामा कुलतमा फस्दै बालबालिका
२०७६ भदौ ४ गते बिहान ७ :५० मा प्रकाशित